Sihlalutya i-Sony Gold Wireless Stereo Iseti yentloko 2.0 [UPHONONONGO] | Iindaba zeGajethi
Sihlalutya i-Sony Gold Wireless Stereo Headset 2.0 [UPHONONONGO]
Xa kuziwa ekudlaleni, ngakumbi ukuba sisebenzisa ithuba leempawu zemidlalo emininzi yabadlali abaninzi, kubalulekile ukuba sikwimeko ezifanelekileyo zomsindo. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabasebenzisi kule mihla luthatha isigqibo sokwenza ngaphandle kweenkqubo zesithethi kwaye bakhethe ii-headphone ezisemgangathweni ukuba banike konke kwimidlalo yabo. Nangona kunjalo, xa sijamelene neenkqubo ezinjenge-PlayStation 4, kunye nezithintelo kwinqanaba loqhagamshelo olungenazingcingo okanye iBluetooth, kufuneka silinganise amathuba amaninzi. Namhlanje siza kuhlalutya i-Gold Wireless Stereo Headset 2.0 evela kwaSony, ii-headphones ezisemthethweni zePlayStation 4 eziba zezinye zezona ndlela zisebenzayo, ewe, azibizi.
Kuyinyani ukuba sinokufumana ii-headphone zawo onke amaxabiso, ukusuka malunga ne-euro ezingama-2.0 siyakufumana ii-headphone ezivela kwiimpawu ezinje ngeTritton eya kuthi isinike umgangatho owoneleyo wokudlala kunye nemakrofoni eyakhelweyo. Nangona kunjalo, sijamelene nezi Gold Wireless Stereo Headset XNUMX ezixabisa phantse amaxesha amane ngaphezulu kunangaphambili, siyintoni isizathu? Siza kuhlalutya izinto ezilungileyo, ezimbi kunye neempawu zezi ntloko zeSony, esiza kukuxelela kwasekuqaleni ukuba basishiye simangalisiwe. Masiye apho kunye novavanyo, kwaye ukuba awufuni ukufunda, ungaphoswa yividiyo yethu.
1 Ubume kunye nezinto zokwenziwa
2 Uncedo lokusetyenziswa kunye nezothutho
3 Umgangatho womsindo kunye nokwenza ngokwezifiso
4 Unxibelelwano kunye nomsebenzisi
5 Umxholo kunye nexabiso
Ubume kunye nezinto zokwenziwa
Okokuqala, into esithandayo kukuba xa sizikhupha ngaphandle kwebhokisi sijongane neplastiki, mhlawumbi ziqinile kunokuba besicinga. I-headband yenziwe ngokupheleleyo nge-polycarbonate, okwangoku, ngaphakathi kwentloko yentloko yenziwe ngezinto ezithambileyo, mhlawumbi isiponji, esigutyungelwe ngumtya wesikhumba esiluhlaza okwesibhakabhaka esibonakala sibambelela kwinxalenye ephezulu yentloko.
Ngokubhekisele kwii-headphone, inxalenye yokunxibelelana nolawulo, unxibelelwano lokutshaja kunye nezinye izixhobo, yenziwa ngesixhobo esilinganisa irabha, enika imvakalelo yomeleleyo eyasweleka kwibhanti yentloko kwaye siqinisekisa ukumelana nendlela. Ixesha lokuchukumisa emva kokuchukumisa iphedi yamaqhosha. Ngokuphathelene neziponji zeendlebe, apha abafunanga ukona kwimikrwelo, isinika iphedi enkulu eqinisekisa intuthuzelo. Le pad ikwagqunywe ngesikhumba se-poly, into esingaziyo ukuba iza kuyichaphazela njani ekuhambeni kwexesha, kodwa inethuba elihle lokuba yinto yokuqala ukucima ukuba asiyiphathi kakuhle.
Uncedo lokusetyenziswa kunye nezothutho
Ibhanti yentloko inenkqubo yokusonga emangalisa ngokuhambahamba kwayo. Ngokulula ngokwenza amandla asezantsi kwenye yee-headphone sinokuzisonga ii-headphone zibuyele kubo, kuqala kwelinye icala emva koko kwelinye, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokukhetha okanye lokufuna ukunyanzela iinxalenye zeplastiki. Eli candelo libalulekile xa uhambisa.
Ukuthatha ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, uSony ubone kufanelekile ukuba ayifake ibhegi encinci microfiber oko kuyasivumela ukuba sifake ii-headphone ezazisongwe ngaphambili, ngale ndlela, singazithatha ukusuka apho ukuya apha ngaphandle kokuziphatha ngokuzixhoma (ziyabonakala kakhulu) okanye kwibhokisi yazo.
Ii-headphone kunye neepads zeendlebe ziyilelwe ukonwatyiswa, zineephedi ezinkulu ngokwaneleyo kunye nemilo ye-ergonomic, oku kuthetha ukuba umngxunya wenzelwe ukuba sifake iindlebe ngokupheleleyo, ngaloo ndlela asizukufumana naluphi na uhlobo lwento evelisa uxinzelelo ngaphaya kweendlebe. Le ngongoma isisigqibo sabasebenzisi abanxiba iiglasi, ukusukela xa befaka indlebe Ayivelisi uxinzelelo kwiitempile zeiglasi kwaye ungadlala iiyure ezininzi ngaphandle kokukhathazeka ngale ngxaki ezinye ii-headphone ezininzi azikho. Ngendlela efanayo, ii-headphone aziqinisi kakhulu, nangona kunjalo, ukwahlukaniswa kwendlebe kuthetha ukuba ngamanye amaxesha sinokuziva singonwabanga ngenxa yobushushu.
Inqaku lesici kunye nentuthuzelo yokuba umboko ayimi naphi na, idityaniswe kwenye yee-headphone, ethintela ukuba singayaphuli ngokulula okanye sikhathaze xa sidlala. Ngokumalunga nokuzimela, kuya kusinika malunga neeyure ezisibhozo.
Umgangatho womsindo kunye nokwenza ngokwezifiso
Sijongene nee-headphone ezazicwangcisa ukuthengiswa njenge-7.1, kodwa ngokucacileyo azikho. Ezinye ii-headphone ze-7.1 zibandakanya uthotho lwee-headphone ezincinci ngaphakathi kweyona iphambili, kwaye akunakufane sifumane ii-headphone ezinezo mpawu zingaphantsi kwamakhulu amabini ee-euro. Nangona kunjalo Kutheni le nto ii-headphone zibonelela ngesandi esingu-7.1 xa zibiza imali encinci? Kungenxa yokuba u-Sony ehambisa amanqaku kunye nokusetyenziswa kwe-PlayStation 4 ukuhambisa isandi esinyani se-3D esilingisa i-7.1. Ngale ndlela, kwakamsinya nje ukuba uzibeke kwaye udlale imidlalo enje ngeCall of Duty, uyakuqaphela ukuba isandi siyangcangcazela, uva iinyawo, izithonga kunye nokuhamba kuzo zonke ii-engile ngokungathi ubukhona.
Olu phawu lwesandi «VSS»Okanye i-3D ilahlekile kwakamsinya nje ukuba sisebenzise ii-headphone ngaphandle kwenkqubo ye-PlaySation 4. Ngelo xesha, ziba zii-headphone zestereo ezisemgangathweni, kunye nokuqiniswa okunomdla kwi-bass kwaye eyona nto iphambili kuyo, ukugquma kwangaphandle, kuyaphuma.
Nangona kunjalo, Zintloko zazo zijolise ngokucacileyo ekudlaleni nasekuzonwabiseni ukudlalaEwe, kwiinkqubo zePlayStation 4. Kucacile ukuba uya kufumana i-headphones enesandi esingcono somculo kwiselfowuni ngelo xabiso, kodwa awuyi kufumana naziphi na ii-headphone ezinikezela ngesandi esifanayo kwi-PlayStation 4 ngexabiso elifanayo, okanye ezifanayo .
Enye into ephambili yile usetyenziso lwePlayStation 4. Ngokukhawuleza nje ukuba sibaxhume siya kuba nokufikelela kwisicelo kunye neeprofayili ezininzi esinokuzifaka kwimemori yee-headphone zethu usebenzisa i-microUSB. Ngale ndlela, sinokumisela enye yeendlela ezimbini zokumamela ezinazo ii-headphone, nokuba zezokudubula imidlalo, iimoto okanye iqhinga. Inqaku kuphela kwezi ntloko linokuxhamla kulo.
Ngokuphathelele micro, inika isandi esicocekileyo ngaphandle kokuphazanyiswa, nangona kunjalo kuyacetyiswa ukuba singasebenzi xa sidlala sodwa, kuba ukuba ikhupha into encinci enokucaphukisa xa sidlala ngevolumu ephantsi.
Unxibelelwano kunye nomsebenzisi
Kuya kufuneka sigxininise ukuba nangona unokucinga, ii-headphone abanabuchwephesha beBluetooth. Oku kungadala iingxaki ngonxibelelwano lweDualShock 4 kwaye uSony uyayazi. Ke ngoko, uqhagamshelo lwe-USB lubandakanyiwe kunye neefowuni eziphuma ngaphakathi RF, Kwaye iya kuba yeyonxibelelwano oluzenzekelayo kunye neefowuni. Ayisetyenziselwa i-PlayStation 4 kuphela, sinokuqhagamshela le USB kwiPC yethu okanye nakweyiphi na into yeaudiyo kwaye siya kufumana isandi ngeRF kwiifowuni ze-PlayStation 4.
Zonke iinqanam zolawulo zibekwe kwikomityi yendlebe yasekhohlo. Ngale ndlela siya kuba neqhosha lenjongo eliza kusivumela ukuba sibeke phambili phakathi komsindo wengxoxo okanye lowo wevidiyo. Apha ngezantsi koku, sifumana utshintsho kwimowudi, sine "OFF" ukucima ii-headphones, «1» kwimowudi esemgangathweni kunye ne «2» yemowudi esele siyilayishe kwimemori kwisicelo.
Kwelinye icala sifumana iqhosha levolumu yeklasikhi, ngaphezulu nje kokunokwenzeka kokuvula nokwenza kungasebenzi i- "VSS" 3d audio virtaulization kwaye emazantsi iqhosha "isimumu" kwimic eliza kusivumela ukuba silithule ngokukhawuleza.
Ekugqibeleni, emazantsi ngokupheleleyo sinonxibelelwano lwejack ye3,5mm kuba xa singena bhetri kunye negalelo le-microUSB ukutshaja ulwazi lwebhetri kunye nenkqubo.
Umxholo kunye nexabiso
Ukupakishwa okubonelelwa nguSony kwezi headphone kulungile. Xa siyivula, siza kuqala sifumane ii-headphone kwaye ngezantsi kwebhokisi enezinto zilandelayo: Intambo encinci ye-USB, i-3,5mm Jack cable, i-USB Dongle kunye ne-microfiber bag ephethe ibhegi.
Kuxhomekeka apho sizifumana khona ii-headphone, ixabiso lingahluka phakathi kweefayile ze- € 89 kunye ne- € 76, LAPHA Sishiya ikhonkco leAmazon ukuze ubenako ukufumana elona xabiso libalaseleyo.
Sijongene nezona ntloko zibiza amaxabiso aphezulu ezinikezela ngokwezifiso ngokupheleleyo i-PlayStation 4. Ewe, musa ukujonga ukuthwala okanye umgangatho weaudio ukuphuma okanye ukudlala imidlalo, zii-headphone ezijolise kwimidlalo nakwinkqubo ekuthethwa ngayo.
Igolide engenazingcingo yeStereo Iseti yentloko 2.0
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya i-Sony Gold Wireless Stereo Headset 2.0 [UPHONONONGO]
Molweni olungileyo, namhlanje ndinentloko yentloko kwaye andazi ukuba ndingaziqhagamshela njani.Ndizisebenzisa ngentambo yeJack kuba andazi ukuba injani i-wireless
Kulungile, ayikasebenzi kum, andazi ukuba iminqwazi ayifumaneki kwisixhobo esiqhagamshelwe kwisicelo, iyadanyaza kunye nerimothi kodwa ayidibani …. Kodwa iapp iyazibona kodwa hayi kwaye ibeka yonke into kum kodwa ayiviwa kwii-headphone ...
Uxolo ukuba ibisikhathaza kakhulu ...
Intsha entsha ye-Samsung Galaxy C7 Pro isungulwe ngokusesikweni
I-Apple isungula kwimveliso yomxholo wayo wee-audiovisual